PLAY စစျေးကွက်အတွက်အကောင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို - MARKET က PLAY - 2019
အဓိက Market က Play
တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းတစ်ရက်နှင့်အတူ ပို. ပို. အသုံးပြုသူများသည်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်တွဲနေကြသည်။ အခြို့သောအဘို့ပြုလုပ်ရုံစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝါသနာရဲ့, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေထိုသို့ဝင်ငွေ-General တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာသည်။ တည်းဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုသာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရောက်စေဖို့စတင်ခဲ့စေရန်, သငျသညျဗီဒီယိုတည်းဖြတ်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ program ကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော Avidemux ဖြစ်ပါတယ်။
Avidemuks - ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်တာဝန်ခံအခမဲ့ဖြန့်ဝေသောတည်းဖြတ်ရေးနှင့် converting ဗီဒီယိုများအတွက်တစ်ဦး functional ဆော့ဖ်ဝဲ, ။
program ကိုစဗီဒီယိုကိုဖြည့်ထည့်, သင်ဘယ်ဖက် pane ထဲကကိုထိန်းချုပ်သောပြောင်းလဲခြင်း function ကို, ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယိုများဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် paste လုပ်လိုက်ပါ
အများအပြားအယ်ဒီတာများ, ဗီဒီယိုဖြတ်တောက်မှုအပိုင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းမလိုအပ်သောအပိုင်းပိုင်းကဲ့သို့တပ်မက်လိုချင်သောအဧရိယာထဲမှာဗီဒီယိုလမ်းကြောင်း positioned ခံရရန် slider ကိုအတူထွက်သယ်ဆောင်အဖြစ် function ကိုသော့ "တစ်" နှင့် "B က" ဖြစ်ပါတယ်။ မလိုအပ်သောတ္ထုကိုဖယ်ရှားရန် "Edit ကို" menu နဲ့ hotkey အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
built-in filter များ
ဗီဒီယို၏အမြင်အာရုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဂီတများအတွက်အဖြစ်ကြိတ်စက်, အသံတိုးတက်ကောင်းမွန်သောတပ်မက်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများလျှောက်ထားထက်မြက်, အရောင်အဝါညှိ, ဆူညံသံကိုဖယ်ရှားနှင့်ပိုပြီးနိုငျသောမှတစ်ဆင့် Filter ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံရှိပါတယ်။
လက်ရှိဗီဒီယို, သင်သည်သူတို့၏အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နောက်ထပ်အသံပုဒ်, add နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်မူလလမ်းကြောင်းပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
1. အဆိုပါအစီအစဉ်ကို download, တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့ရရှိနိုင်၏,
2. functional converter ကို;
3. ဟာ operating system ပေါ်တွင်အနိမ့်ဝန်။
1. အင်္ဂလိပ်နှင့်အတူလက်ဆွဲ Gnarled ရုရှားဘာသာပြန်ချက်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
Avidemux အခြေခံဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူကြောင့် filter များမှဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုး, converting နှင့်ထို့ထက် ပို. နိုင်ပါတယ်။
အခမဲ့ Avidemuks Download
Avidemux ဗီဒီယိုကိုချုံ့ဖို့ကိုဘယ်လို Avidemux အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို ဗီဒီယိုကိုချုံ့ဖို့အများစုမှာဗွီဒီယိုကိုအယ်ဒီတာများ ဂီတဗီဒီယိုမွမ်းမံဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို
Avidemux - ပေါ်ပြူလာကဗီဒီယိုကို formats ပြောင်း built-in tools များနှင့်အတူဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အခမဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
System ကို: Windows7ကို, 8, 8.1, 10, Vista, XP
အမျိုးအစား: Windows အတွက်ဗီဒီယို Editor ကို
Size: 29 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: Emma Learn Colors Pretend Play with Pink Kids Slide and Princess Carriage Inflatable Toy (အောက်တိုဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © Market က Play 2019